-Dhacdo Dheeman shiidida saxanka PCD Cup Wheel ka saar Epoxy Dabaqa la taaban karo
Dhuxul dheeman dhogorta leh
Taayirrada Koobka Dheeman
Dheeman shiidida Disc PCD C...
Sintered Turbo Diamond Cup...
Dheeman Resin Bond Polit qoyan...
Dheeman shiidida saxanka PCD Cup Wheel ka saar Epoxy Dabaqa la taaban karo
Dhexroorka kangiraangiraha pcd koobwaa 5inch (125mm).
Ku alxanka 6 rubuc wareega PCDs (dheemanta polycrystalline) oo isku xigta.
Saldhigga birta ee giraangiraha koobka PCD-ga waxa ay la socdaan godadka hawo-qaadista si ay u baabi'iyaan kulaylka una yareeyaan miisaanka qalabka.
Dheesha aan dunnida lahayn ee 22.23mm, dunta M14 ama 5/8-11 geedo yaryar ayaa sidoo kale diyaar ah.
Taayirada koobka PCD waa qalab aad u qallafsan oo loogu talagalay in laga saaro dahaarka culus sida epoxy, resin, mastic, haraaga xabagta rooga, dhejisyada khafiifka ah iwm waxayna kordhisaa wax soo saarka qalabka.
Taayirada koobka PCD waxaa inta badan loo adeegsadaa shiishada gacmaha si ay uga shaqeeyaan geesaha, geesaha ay adagtahay in la gaaro makiinadaha dhulka, iyo meel kasta oo aan gaari karno.
Taayirada koobka PCD waxaa loo isticmaali karaa qoyan oo qalalan.
Z-LION PCD-26 koob giraangireed waa qalab saarista daahan kacaanka loogu talagalay in si deg deg ah looga saaro daahan, xabagta iyo xargaha.6 ee 1/4 dheeman polycrystalline wareeg ah ayaa hubiya xirashada ugu badan iyo wax soo saarka.Tilmaamaha gaarka ah ee qalabku waa sida soo socota:
Taayirada koobka PCD ayaa aad uga dagaal badan kana raaga marka loo eego dheeman dhaqameedkawheel koob la taaban karo.
Taayirada koobka PCD waxaa loo isticmaali karaa codsiyada in taayirrada koobka dheemanka dhaqameed aysan si degdeg ah u shiidi doonin alaabta ama ay u muuqdaan inay xirmaan.
Shaagagga PCD ma rari doono ama ma xoqin daaha sida taayirrada koobka dheemanka dhaqameed.
Taayirrada koobka PCD-ga maaha oo kaliya in ay shiidaan alaabta.Ficilka shiidadu waxay ku habboon tahay in laga saaro mastic, xabagta, ama dahaarka kale ee elastomerka.Halka taayirrada koobka dheemanka dhaqameedku ay kululaadaan, kor u kacayaan, oo ay noqdaan kuwo kharriban marka la isku dayayo in la saaro dahaarkaas elastomerka.
PCDgiraangiraha dhalaalaya dheemanka tag xagtin qoto dheer, taas oo ku habboon in lagu dabaqo xarun kale.
Gabal 1/4 PCD
Qalab PCDs+Metal base
Isticmaalka Qoyan oo qallalan
Taayirada koobka PCD waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu saaro daahan kala duwan oo dhumuc weyn iyo elastomer ah sida epoxy, resin, mastic, haraaga xabagta rooga, khafiif ah iwm gaarno, oo lagu daray meel kasta oo aan gaari karno.Waxaa loo isticmaali karaa labadaba qoyan iyo qalalan.
Hore: Turbo Dheeman Cup Wheel Sintered oo loogu talagalay Shiididda Dabaqaha la taaban karo
Xiga: 16 Sano Dhoofinta Warshada Shiinaha 4 Tallaabo 3/4 inch Granite/Aalladda Dheemman Marble Resin Resin Bond Allaasive Tools Wershadaha suufka qallalan
5 giraangiraha shiida
5 inch shiidi giraangiraha
wheel Booqday Furimaha Dagaalka abrasive
giraangiraha shiida abrasive
giraangiraha gooya la taaban karo
dheeman shiida giraangiraha la taaban karo
shiidi sagxada la taaban karo
Taayirada PCd Cup
Sintered Turbo Diamond Cup Wheel oo loogu talagalay la taaban karo
Qaybta Rhombus ee koob dheeman ah giraangiraha shaqada geesaha